WHO: Waa la yareystay halista Ebola - BBC News Somali
WHO: Waa la yareystay halista Ebola
15 Agoosto 2014
Hay'adda caafimaadka aduunka ee WHO ayaa sheegeysa in shaqaalaheeda ay arkeen cadeymo muujinaya in tirada dadka lagu soo waramay in ay u dhinteen ama cudurka Ebola uu ku dhacay, aanay ka turjumeyn heerka ay gaarsiisan tahay Mushkiladan.
Warbixin ay soo saartay ayaa hay'ada waxa y ku sheegtay in loo baahnaa in laqaado talaabooyin qeyru caadi ah.
Haseyeeshee hay'adda caafimaadka aduunka ee WHO waxa ay sheegtay in ay yartahay qatarta ah in cudurkani la isugu gudbiyo diyaaradaha lagu safro iyo in hawada la isku qaadsiiyo.
Waxa ay intaa ku dartay WHO in la filayo in cudurkani uu sii socdo in muddo ah.
Caqabadaha lala kulmayo ayaa waxa ay ku tilmaantay in ay ka mid yihiin in meelaha uu ka jiro cudurkan ay yihiin meelo ay ka jiraan saboolnimo xad dhaaf ah, hanaan caafimaad oo aanan shaqeneyn iyo tirada dhaqaatiirta oo aad u yar iyo cabsi aad u badan.
Dalka Nigeria laba qof ayaa dhintay kaddib markii ay cabeen biyo lagu qasay cusbo iyadoo ay soo baxeen warar la isla dhexmarayey oo sheegayey in biyaha cusbada lagu qasay ay qofka ka difaaci karaan Ebola.
Weriyaha BBC-da Ishaaq Qaalid ayaa sheegay in dadka ay isdhaafsanayeen fariimaha telefoonka la isugu diro oo dadka kula talinayey in ay cabaan kuna qabeystaan biyaha lagu qasay cusbada.